ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ...: 2010
ဖေးကူ ထူမမည့် လက်များအတွက်...
တနေ့ က ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့် TV အစီအစဉ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်…Bersamamu ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေး လာနေသည်… ဒီအစီအစဉ်လေးက နွမ်းပါးသူများကို ကူညီဖို့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေးကို ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်း ဖြစ်ပါတယ်….အမှန်က ဘလော့လိုက်လည်မယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်နေတာ…TV ကိုလဲ ကြည့်ချင်တာနဲ့ ဖွင့်လိုက်တော့ မြင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို စိတ်ဝင်စား သွားမိတယ်… ဒီအစီအစဉ်လေးကို မကြာခဏ ကြည့်မိပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ခုတစ်ကြိမ်ကြည့်ပြီးတော့ စိတ်ထဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာရော အတွေးလေး ၀င်တာနဲ့ ဒီစာလေး ရေးဖြစ်ပါတယ်…
ဒီနိုင်ငံမှာ အဓိကအားဖြင့် မလေး ၊ တရုတ် ၊ အိန္ဒိယဆိုပြီး လူမျိုး သုံးမျိုး ရှိပါတယ်…ဒီနိုင်ငံမှာ အဓိကထားကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကတော့ မူဆလင် ဘာသာပါ…အခု TV3မှာ ပြပြနေတဲ့ ဒီအစီအစဉ်လေးက သူတို့ ရဲ့ အဓိကထားတဲ့ ဘာသာဝင်နဲ့ လူမျိုးဖြစ်တဲ့ မလေးလူမျိုး တနည်းအားဖြင့် လောကမှာ ဘယ်လိုအခက်ခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ စိတ်မလျှော့ပဲ ဇွဲနဲ့ ကြိုးစားတဲ့ တကယ့်ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ သူတွေ(မလေးလူမျိုး)ကို စေတနာရှင်အဖွဲ့ က ကူညီပေးတာလေးကို တင်ဆက်ထားတာပါ…
ဒီတစ်ခေါက် စေတနာရှင်အဖွဲ့ ရွေးချယ်ထားတာကတော့ အသက် ငါးဆယ်ကျော် အဖိုးအို တစ်ယောက်ပါ…သူရဲ့ရုပ်ရည်ဟာ လောကဓံကြောင့်ပဲလားမဆိုသာ..ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက်ကို ပိုလို့ အိုစာနေပါတယ်….သူဟာ တစ်ယောက်တည်းသမားဖြစ်တဲ့ အပြင် ဆွံ့ အ နားမကြားသူတစ်ယောက်ပါ… ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားမှာ အမိုးအကာ မလုံ ရေချိုမရှိ ရေဘုံဘိုင်မရှိ လျှပ်စစ်မီးမရတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်လာတာ ဆယ်စုနှစ် စွန်းစွန်း ရှိခဲ့ပါပြီတဲ့….စက်လှေအသေးစားလေးနဲ့တံငါလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရင်း ၀မ်းစာကို ဖြေရှင်းနေရပါတယ်တဲ့…သူငါးရှာ ထွက်ချိန်မှာ ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ တွေဟာ ဒီနေ့ ငါးဘယ်လောက်ရလဲလို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ မေးတော့ သူက တစ်ကောင်မှ မရတဲ့ အကြောင်း သူ့ ပိုက်ကလေး ထိုးပြပါတယ်…ဒီနေ့ အတွက် အဖိုးအိုရဲ့ ဝမ်းစာ ခက်ခဲလောက်ပြီပေါ့… သူက ဆက်ပြီး သူ့ မှာသာ ဆီအလုံအလောက်ရှိရင် ဒီထက်ဝေးတဲ့ နေရာတွေကို သွားပြီး ပုဇွန်တွေ အများကြီး သူဖမ်းချင်ပါတယ်လို့ သူ့ စိတ်ကူးလေးကို ပြောပြပါတယ်…သူရရှိလာတဲ့ ငါးများကို သူ့ အတွက် စားလောက်ရုံသာ ထားပြီး ပြန်လည် ရောင်းချပါသေးတယ်...
သူက ဘယ်သူ့ ကိုမှ အားမကိုးချင်ဘူး…တစ်ယောက်တည်း အမှီခိုကင်းကင်း နေထိုင်တတ်ကြောင်းကို သူ မကျန်းမမာဖြစ်တဲ့အခါ လာရောက် စောက်ရှောင့်ပေးတဲ့ ရွာထဲက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်… သူ ဟာရေချို ရရှိဖို့ အတွက် မိုးရွာလျှင် ရေတံလျှောက်မှ မိုးရေများကို ပလပ်စတစ်စည်ပိုင်း အသေးသုံးလုံးနဲ့ သိုလှောင်ထားတတ်ပါတယ်… (ဒီနိုင်ငံမှာ မိုးက အစိုးမရပါဘူး...ရွှေပြည်ကြီးက ဟိုလူကြီးတွေလိုပဲ...)…
သူ့ ရဲ့ အိမ်ကလေးကိုလည်း ထုတ်တန်းဘေးက အရံတန်းတွေ ကျိုးနေတာကိုတောင်မှ သူ့ မှာ ပီနန်ကြိုးနဲ့ ဆက်ထား ရပါ တယ်..အိုးခွက် ပန်းကန်တွေဟာလဲ ကျိုးပဲ့လို့ …မြင်မြင်သမျှ အရာရာဟာ အဖိုးအိုရဲ့ နေ့ စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘ၀ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်သာနိုင်ပါတယ်...သူ့ ဘ၀ ဆင်းရဲနုံချာပေမဲ့ သူဟာ ဘ၀ကို အားတင်း ရုန်းကန်တယ်ဆိုတာ သူ့ ကို ကြည့်တာနဲ့ သိသာပါတယ်…
စေတနာရှင်အဖွဲ့ မှာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဆရာနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများပါ လုပ်အားပေးဖို့ လိုက်ပါလာကြပါတယ်… အဖိုးအိုဆီ သွားတဲ့လမ်းက လမ်းကောင်း လမ်းချောမဟုတ်ပါဘူး…မြို့ နဲ့ လဲ အလှမ်းဝေးသလို အိမ်အနီးက မြောင်းလေးကို သစ်သားတန်း သေးသေးလေး ဖြတ်ကျော်ပြီးမှ အဖိုးအိုအိမ်ကို ရောက်တာပါ…
လုပ်အားပေး စေတနာရှင် အဖွဲ့ တွေ ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူတို့ ဟာ အဖိုးအိုရဲ့ နေ့ စဉ်လုပ်ငန်းတွေ သူရဲ့ အိမ်အခြေနေ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို လေ့လာပြီးတော့ သူတို့ ရဲ့ လုပ်အားပေးအစီအစဉ်ကို စတင်ပါတယ်… ကျောင်းသား ကျောင်းသူများက အိမ်နဲ့ ဝန်းကျင်ကို တံမြက်စည်းလှည်း သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးသလို စေတနာရှင် အဖွဲ့ တွေကလဲ ပြုပြင်စရာရှိသည်များကို ပြုပြင်ပေးကြပါတယ်…ထို့ အပြင် အဖိုးအို ဖမ်းလို့ ရလာတဲ့ ငါးပုဇွန်တွေကို ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက်လည်း ကမ်းစပ်မှာ သူတို့ ဂျက်တီတစ်ခု ဆောက်မယ်လို့ ပြောသွားပါသေးတယ်...အားလုံး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် ပြုပြင်ပြီးစီးသွားတော့ အဖိုးအိုအတွက် လှူမဲ့ အ၀တ်အစား ၊ အသုံးအဆောင် ၊ အစားအသောက်တွေကို နာမည်ကျော် ကုန်တိုက်တစ်ခုက လှူဒါန်းကြပါတယ်….နောက်ဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ မလေးငွေ ၂၀၀၀ လှူဒါန်းမှုကိုတော့ Bersamamu မှ တာဝန်ရှိသူများက အဖိုးအို ပေးအပ်ကြပါတယ်… လှူဒါန်းသော ပစ္စည်းများကိုကြည့်ကာ ပျော်မြူးနေတဲ့ အဖိုးအိုကို ကြည့်ရင်း အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ အဖိုးအိုဆီ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းလိုပါက အဖိုးအိုရဲ့ အကောင့်နံပါတ်နဲ့ နာမည်ကို ဖော်ပြပြီး အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အစီအစဉ် လှူဒါန်းမှုတွေမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အဖွဲ့ ရဲ့ လိပ်စာ..နာမည်နဲ့ လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကို ဖော်ပြကာ အစီအစဉ်လေး ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်...အစီအစဉ်ပြီးသွားပေမယ့် ...မပြီးနိုင်သေးတာက ကျွန်မပါ....ပထမဆုံး စဉ်းစားလိုက်မိတာက ကျွန်မမိဘတွေကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူတို့ ကြောင့် ကျွန်မ ဒီဘ၀မျိုးမှာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင် အဆင်ပြေပြေ နေနိုင်နေလို့ ပါ...
နောက်တစ်ခုက ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာရော ဒီလိုမျိုး ဆင်းရဲနွမ်းပါးချို့ တဲ့သူတွေ ဘယ်နှယောက်များရှိမလဲ…. သေချာတာကတော့ မရေတွက်နိုင်အောင် ကျွန်မတို့ မသိနိုင်အောင် များပြားနေမှာပါ… ဒါပေမဲ့ ဒီမှာလိုမျိုး ကူညီမယ့်သူ စောင့်ရှောက်မယ့်သူ ဘယ်နှယောက်များ ရှိသလဲ… ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှုက ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားနေတဲ့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ချမ်းသာလွန်းတဲ့သူတွေ စုပေါင်း ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ ဒီလိုမျိုး ဖောင်ဒေးရှင်းများ ရှိသလား…. သူတို့ ရဲ့ ချမ်းသာမှုတွေ ကြွယ်ဝမှုတွေကို နွမ်းပါးချို့ တဲ့သူ ဘယ်နှယောက်ကိုများ နည်းနည်းစီ ဝေငှဖူးသလဲ…ဆာလောင်နေတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ငိုသံတွေ ၊ တစ်နေ့ တာ ၀မ်းစာ လောက်ငှမှု မရှိတဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးသံတွေ ခုဆိုရင် ဘေးဒုက္ခ အမျိုးမျိုး ဆိုက်လို့ ညည်းညူသံတွေ ဒါတွေကို မြင်နိုင်ကြရင် ကြားနိုင်ကြရင် ရင်ဘတ်နဲ့ နားထောင်နိုင်ကြရင် စာနာမှုတရား လက်ကိုင်ထားလို့ ဖေးကူထူမမည့် လက်များစွာ ရှိခဲ့ရင်... တွေးရင်း တွေးရင်း ကျွန်မရဲ့ အတွေးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေးသွားသလိုပါပဲ….
Posted by ကာရံဆူး at 10:44 AM6comments:
Cameron Highland သို့ အလည်တစ်ခေါက်....
ခုတလော စာမရေး ၊ ကဗျာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကို ကြာနေပါပြီ...လာလည်တဲ့သူများကိုလဲ အားနာမဆုံးပါဘူး...
ဒါကြောင့် ခုတလော လျှောက်သွားဖြစ်တဲ့ နေရာလေးတွေနဲ့ ပဲ နှစ်သိမ့်ပါရစေ...
အသိတစ်ယောက် သူ့ မိသားစု လာလည်လို့ လိုက်ပို့ ရင်း ကိုယ်က ကပ်မြှောင်လိုက်သွားတာပါ... မနက် (၅)နာရီခွဲမှာ အိမ်က ကားစထွက်လို့ စတော်ဘယ်ရီ စိုက်ခင်း ၊ လက်ဖက်စိုက်ခင်း နဲ့ တခြား စိုက်ခင်းတွေရှိတဲ့ တောင်ပေါ် (Cameron Highland)ကို မနက် (၈)နာရီခွဲလောက်မှာ ရောက်ပါတယ်...တလမ်းလုံး အိပ်သွားလို့ လမ်းရှုခင်းတွေ တစ်ပုံမှ မရိုက်လိုက်ရပါ...ကားပေါ်ပါသူများက လမ်းမှာ “ဟာ နှင်းတွေ နှင်းတွေ”ဟု အော်မှသာ မျက်စိပွင့်တော့သည်...ဟုတ်သည် လမ်းကို မြူတွေ နှင်းတွေက ကာဆီးထားသည်...
တောင်ပေါ်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လေက အေးသည်...
စတော်ဘယ်ရီတွေ ဒီလို ခူးခဲ့တယ်... တစ်ကီလို မလေးငွေ(၃၀)တဲ့...
ရေတံခွန်နားမှာ ပေါက်တဲ့ပန်း ဘာပန်းလဲ မသိပါ...
ရေတံခွန်ထိပ်မှာ ကျားကုတ်ကျားခဲ ခြေကုတ်ယူပြီး ရိုက်တာပါ...လှချင်လွန်းလို့ ... :)
အပြန်လမ်းမှာ နုဖတ်နေတဲ့ မျှစ်ဆို့ ကြီးတွေ ရောင်းတာတွေ့ လို့ ဝယ်ခဲ့သေးတယ်...ဓါတ်ပုံတော့ မရိုက်ဖြစ်ပါ....
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရယ် ၊ နှင်းဆီပန်းတွေရယ် ၊ သစ်ခွပန်းတွေရယ် ၊ နောက်ကျွန်မ မသိတဲ့ အပင်စုံတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါ....သစ်ခွမျိုးတွေ အများကြီးပဲ ကျွန်မ မမြင်ဖူးတာတွေလဲပါတယ်...
လမ်းက တောင်မှာ ကပ်ပေါက်တဲ့ သစ်ခွတွေကိုလဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ရအောင် ခူးတဲ့သေးတယ်...
ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့ ကျွန်မ...
တောင်အောက်ရောက်တော့ အားလုံးက ဗိုက်ဆာနေပြီမို့ ထမင်းစားကြတယ်...တောင်တက် တောင်ဆင်း အကွေ့ အ၀ိုက်က များပြီး ကြာလို့ ခေါင်းမူးသွားတဲ့ ကျွန်မကတော့ မစားဖြစ်တော့...ပါလာသော အသိရဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်လဲ တဝေါ့ဝေါ့နှင့် ဆန်ပြုတ်တွေ ထုတ်လာတာ ကားတစ်စီးလုံးလဲ ချဉ်ဖတ်စော်နံနေတော့သည်...:P ဘာမှ မစားချင်တာကြောင့် ၀ယ်လာသော စတော်ဘယ်ရီသီးတွေပဲ ထိုင်စားနေလိုက်တယ်...
ထိုမှ တစ်ခါတည်း ဆက်သွားဖြစ်တဲ့ ပီနန်ခရီးကိုတော့ နောက်တစ်ပိုင်း ရေးပါမည်...ခုတော့ နားပါဦးမယ်...
Posted by ကာရံဆူး at 9:53 AM4comments:
ရာသီဥတု ပူပူနဲ့ မို့ ကျွန်မလဲ ခံတွင်းပျက်နေပါသည်...ထို့ ကြောင့် ဖြစ်သလိုလေးပဲ စားလိုက်ပါတယ်...
ဒါက မနိုင်းနိုင်းစနေဘလော့က နည်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကင်မ်ချီပါ...ဟိုတစ်နေ့ က cameron highland သွားရင်း တောင်ပေါ်မှာ ပိုးတီလေးတွေ တွေ့ လို့ ဝယ်လာတာ တစ်ခါတည်း ထည့်လုပ်လိုက်တာ..စား စား...စားနိုင်သလောက်စား...
ဒါကတော့ ကင်မ်ချီ ၊ မြန်မာပြည်မှ ပဲငပိ (ကြော်စားသော ပဲငပိအ၀ါလေး) ၊ ပဲပြား နဲ့ကြက်သားရောချက်ထားတဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဟင်းတစ်ခွက်ပါ...
ထမင်းစားပြီးရင် ဒါလေးစားချင်လို့ ကြော်ထားတာ..စားသွားပါဦးလား...ပြောင်းဖူးကြော်ကြွပ်ကြွပ်လေး...
ဒါကတော့ ဟိုတစ်နေ့ ပြောင်းဖူးကြော်ရင်း ဆီပေါက်ခံရတာပါ... (ဒါတောင် အမှတ်မရှိ ထပ်ကြော်သေးတယ်..အဲ့လို ငတ်တာ)
ဘယ်လောက် နာနာပါ..အစားသောက်အတွက်ကိုတော့ ဘလော့တကာလည် ချက်နည်းရှာပြီး တတ်သလောက် လုပ်စားနေတာပါ...အင်းးးးး ဒါတောင် ၀ိတ်ချချင်နေသေးတာ...ဖြစ်မယ်မထင်... :(
ကဲ လာလည်သူ မိတ်သဟာများလဲ စိတ်မှာ ဘာအတေးမှ မထားပဲ..လာလွေးကြပါနော်...
Posted by ကာရံဆူး at 9:47 PM2comments:
Labels: ခံတွင်းတွေ့ ရာ
ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) ပြည်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၂၆ ရွာတွင် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသဖြင့် ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက 095370101 ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးပါရန်...
(အသိ ဦးဇင်းတစ်ပါးမှ အကူညီတောင်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါသည်...မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပူပြင်းလွန်း၍ သောက်သုံးရေ အခက်ခဲ ဖြစ်နေကြပါသည်...အိမ်ကို ဖုန်းဆက်မေးတော့လဲ တချို့ နယ်တွေမှာ ဖြစ်နေကြပြီး နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်လည်း ဖော်ပြထားသည်ဟု ပြောပါသည်... မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေလဲ မင်းမကောင်းလို့ သဘာဝဒဏ်တွေ ခံနေကြရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...)
Posted by ကာရံဆူး at 8:42 AM3comments:
ဒီပို့ စ်ကို ရေးသင့် မရေးသင့် စဉ်းစားရင်း တခြားသူတွေပါ စိတ်ထားတတ်အောင် ကျွန်မ ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်… ဒီပို့ စ်ကို ကျွန်မက ဒေါသ နှင့် ရေးခြင်းမဟုတ်ပါလို့ ကနဦးရှင်းပြထားပါရစေ…အမှန်တော့ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ လူမျိုးများ အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူစေချင်ပါသည်… ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည် သက်ဝင် လေးစားစေချင်သော စေတနာဖြင့် ရေးသားရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်..
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးပြောင်းခဲ့ပါပြီ… နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဒီသင်္ကြန် အခါကာလတွင် အမိမြေနှင့် ဝေးကွာနေသူများအဖို့ ရတောင့် ရခဲလှသော ကုသိုလ်ဒါန များကို သဒ္ဒါ တရား ထက်သန်စွာဖြင့် လှူကြ တန်းကြ ကုသိုလ်ပြုကြတာ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့တစ်ခုပါ….
ကျွန်မတို့ စက်ရုံတွင်လဲ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်မယ်လို့့အလုပ်မှ စက်ရုံမန်နေဂျာက ကျွန်မရှိရာ ရုံးခန်းသို့ လာကာ တကူးတက လာရောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါတယ်… သူ ကဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်မယ်…ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကိုလဲ လျှောက်ထားပြီးသားမို့ဦးဇင်း အပါး ၂၀စာ ကျွန်မက ဦးဆောင်ကာ ချက်ပြုတ်ပေးဖို့အကူအညီ တောင်းလာပါတယ်…ကျွန်မတို့ အလုပ်တွင် မြန်မာမိန်းကလေးဟူ၍ ကျွန်မနှင့် နောက်တစ်ယောက်သာ ရှိပါသည်… ကျွန်မက ဒီအလုပ်မှာ လေးနှစ်ကျော်တဲ့ အပြင် အားလုံးက ညီအစ်ကို မောင်နှမလို ခင်ခင်မင်မင်ဆိုတော့ အတော်အတန် ရင်းနှီးသလို အလုပ်မှ လူများအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါ…ထို့ ကြောင့် ငြင်းဆန်မိပါသေးတယ်…ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူတို့ မလုပ်လဲ ကိုယ်က ကိုယ့်အိမ်မှာ အလှူကတော့ လုပ်မှာလေ... ပြီးတော့ ကျွန်မက အိုးကြီး ခွက်ကြီး တစ်ခါမှ ဦးဆောင်၍ မချက်ဖူးပါ…ဒါကြောင့် ချက်တော့ ချက်ပေးမယ်..သို့ သော် ၀ိုင်းလုပ်မဲ့ လူ နှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက်မှ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်… ထိုအခါ မန်နေဂျာမှ သူရအောင် စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ဆိုကာ..ညနေတွင် အလုပ်သမားများကို အစည်းအဝေးခေါ်ကာ အစီအစဉ်ကို တိုင်ပင်ကြပါသည်…ကျွန်မကတော့ ရုံးမှ သူတို့ အစီအစဉ် ဖြစ်မဖြစ်ကိုသာ သတင်းနားစွင့်နေမိပါသည်…
ညနေရုံးဆင်းချိန်အထိ ကျွန်မလဲ စောင့်နေမိသေးသည်…ရုံးဆင်းချိန်ကို နာရီဝက်ကျော်မှ အဖြေက ထွက်လာသည်…၀ိုင်းလုပ်မည့်သူမရှိလို့ ဆိုပါသည်…ထို့ ကြောင် မန်နေဂျာမှ ဘုန်းကြီးအား လှမ်း၍ ဆွမ်း မကပ်ဖြစ်တော့ကြောင်း ကျွန်မကိုလျှောက်ခိုင်းပါသည်… ကျွန်မအနေနှင့် ဒေါသ ထွက်သွားမိသည်…အစကတည်းက ကိုယ့်လူတွေက ဘယ်လို ဆိုတာ သိပြီးသားမို့ ဘာမှ မပြောပဲ ငြိမ်နေခဲ့သည်…တစ်နှစ်မှ တစ်ခါလုပ်သည့် ကုသိုလ်ရေးမို့ စိတ်အားများ ထက်သန်လေမလားလို့ တွေးမိကာ အစီအစဉ်ဆွဲသော မန်နေဂျာအား စိတ်တိုရမည်လော…ကိုယ့်မြန်မာများကိုပင် စိတ်တိုရမည်လော မဝေခွဲတတ်ပါ...
ကျွန်မတို့ စက်ရုံတွင် ယခင့် ယခင်နှစ်များတွင် တက်ညီလက်ညီ ချက်ကြပြုတ်ကြ လှူကြ တန်းကြရာတွင် ကျွန်မပင် ၀င်ပါစရာမလိုပါ…အားလုံး သူ့ အစီစဉ်နဲ့ သူ ဖြစ်သွားတာချည်းပါပဲ..ဒီနှစ်ကတော့ လူဟောင်းများကလဲ ပြန်သွားကြသလို သြဇာညောင်းသူကလဲ မရှိ ဦးဆောင်မည့်သူ မဲ့နေလေတော့… ထင်ရာစိုင်းနေကြသည်…နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျွန်မတို့ သူဌေးမှ ဒီလိုနှစ်ကူးပွဲမျိုး…အခြားဘာသာကွဲများ (မြန်မာ မွတ်စလင်များ) ၏ အလှူပွဲများတွင် သူဌေးမှ ကုန်ကျစရိတ်ကို တာဝန်ခံပေးလေ့ရှိသည်…တစ်ခါတစ်ခါတွင်လဲ သူက အကုန်ကို တာဝန်ယူသော်လဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိတို့ စုပေါင်းအားဖြင့် လုပ်ရတာမျိုးလဲ ရှိသည်..များသော အားဖြင့် သူဌေးကသာ ကုန်ကျခံသည်…
ဒီနှစ်တွင်လည်း သူဌေးဆီမှ ကုန်ကျမည့်ငွေကို ရရှိပြီးသားမို့ အလှူတစ်ခု ချောချောမောမော ဖြစ်မြောက်စေချင်သည်… နှစ်တိုင်း သူဌေးဆီမှ ရသောငွေကို အလှူအတွက် အသုံးပြုသလို စက်ရုံမှ ကိုယ်တော်များ သောက်စား မူးယစ်ဖို့ ရန်လဲ အသုံးပြုပါသည်…ဒီနှစ်တော့ အလှူ မဖြစ်တော့ဟု ဆိုပါက ထို ယမကာသမားများအတွက် ပွဲတော်ပင် ဖြစ်ပေမည်…ထို့ အပြင် တစ်နှစ်တာ ပတ်လုံး ကုသိုလ်ဒါနဟူ၍ စိုးစဉ်းမျှ မရှိခဲ့ကြသော ထိုလူများသည် သေရည်အတွက်တော့ လစာကုန်ချင် ကုန်ပါစေ..ကုန်အောင် သောက်ကြမည့်သူမျိုးက များသည်…မသောက်သောသူဟူ၍ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စသာ ရှိသည်..
သို့ သော် မိုးလင်းလျှင် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ကာ ညရောက်လျှင်ပုံမှန် အရက်သောက်သော ဦးလေးမှ အလှူ မဖြစ်လို့ က မဖြစ်..ဘုန်းကြီးကို ဘယ်လို ပြန်လျှောက်ထားကြမလဲဟု ပြန်ပြောလာသောကြောင့်..ကျွန်မတို့ သုံးယောက် ပြန်တိုင်ပင်ကာ မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ လှူမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်… မနက်ပိုင်း အကျွေး အမွေးနှင့် ည (၇)နာရီတွင် ပရိတ်တရားနာရန်တို့ အတွက်ပါ စီစဉ်ထားလိုက်သည်… တရားပွဲ အတွက်ကို ကြိုတင် စီစဉ်ထားသည်မို့ ထိုနေ့ မတိုင်ခင်တွင် အားလုံးသိစေရန် ကျွန်မကိုယ်တိုင် စာရိုက်ကာ ကပ်ဖို့ အတွက် တစ်ရက်ကြိုကာ ပေးထားခဲ့သည်….ထို့ နောက် အိမ်သို့ မပြန်တော့ပဲ ကျွန်မတို့ ဈေးဝယ်ရန် ကောင်လေး နှစ်ယောက် ၀ိုင်းသယ်ဖို့ အတွက် ခေါ်လာခဲ့ပါသည်…
အားလုံးဝယ်ခြမ်းပြီးတော့ ၀ိုင်းလုပ်ရန်အတွက် ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ လုပ်မယ်ဟု ပြောသည်…သူကတော့ မသောက်စားတတ်တဲ့သူပါ…ထို့ ကြောင့်သူ့ ကို ကျွန်မ အိမ်ခဏပြန် ရေမိုးချိုး အ၀တ်လဲကာ ပြန်လာခဲ့မည်… စက်ရုံတွင် ပစ္စည်း မစုံလင်သောကြောင့် တချို့ ဟင်းလျာအတွက် လိုအပ်သည်များ စီမံပြီးမှ ပြန်လာမည်ဟု ပြောထားခဲ့လိုက်သည်…
ည ၁၀နာရီလောက် ကျွန်မရောက်တော့ ထိုကောင်လေးမှ တပါး အားလုံးလိုလို ရေချိန်တော်တော်ကိုက်ကာ ကာရာအိုကေနှင့် ထင်တိုင်းကြဲနေကြသည်… မန်နေဂျာလည်း အပါအ၀င်ပါ… ထို့ ကြောင့် ကျွန်မ စကား ဆက်မဆို စိတ်ထဲမထားတော့ပဲ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိသည်များကိုသာ ရှိတဲ့သူနှင့်သာ စချက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့သည်…
မန်နေဂျာမှ ဟင်းအကျက်မြန်စေရန် ထင်းနှင့်ချက်ပါလားဟု ပြောလာသဖြင့် ကျွန်မ သဘောတူလိုက်သည်… ထိုအချိန်တွင် ကျွန်မ ကောင်လေး နှင့် ဧည့်သည်တစ်ယောက် အပြင် နောက်တစ်ယောက်တို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ လုံးပန်းနေကြသည်…ထိုတစ်ယောက်က အရမ်းမူးနေသော်လဲ သူ့ တွင် ၀ိုင်းလုပ်ချင်စိတ်ကလေးက ရှိနေသည်ဆိုတော့ သူ့ ကို လွယ်ကူရာပဲ ခိုင်းနိုင်သည်…
မီးမွှေးပြီဆိုမှတော့ ဟင်းအိုးများ အဆင်သင့်ဖြစ်ရတော့မည်..ထို့ ကြောင့် တစ်အိုးပြီး တစ်အိုးတည်ရန် ပြင်ဆင်ရတော့သည်… ထိုတွင် ပြဿနာက စပါတော့သည်…၀က်သားချက်ရန် ပဲငံပြာရည်လိုသည့်အတွက် ကျွန်မက ဈေးထဲတွင် ၀ည်မည် အလုပ် ကောင်လေးက သူ့ ဆီမှာ ရှိတယ်…၀ယ်မနေနဲ့အစ်မဟု ပြောသဖြင့် ၀ယ်မလာခဲ့…အခု ချက်တော့မည် ပဲငံပြာရည် ပုလင်း သွားယူဆိုတော့ ငါးငံပြာရည် ပုလင်း ယူလာလေသည်… ကျွန်မမှာ အချိန်ကြည့်တော့ ည (၁၁)နာရီထိုးနေပြီ…ထို့ ကြောင့် စက်ရုံနှင့်နီးသော ကျွန်မအိမ်သို့ သွားယူခိုင်းတော့ စက်ရုံက ကားက ဆီမရှိတော့ ဆိုသဖြင့် ကားသော့ပေးကာ မြန်မြန်လာခဲ့ဖို့ မှာရသည်… ဦးလေးမှ ဟိုကောင်တွေလဲ အရက်ဝယ်မလို့ လမ်းကြုံလိုက်ချင်တယ်ဟု ပြောလာသည်…ကျွန်မက အသံကို နည်းနည်းမြှင့်ကာ အရက်ဝယ်မယ်ဆို ကားသုံးခွင့်မပေးဟု အော်ပြောလိုက်သည်… ဒါကိုပင် ဘယ်အချိန်က ဘယ်လို ခေါ်တင်သွားသည် မသိ…အရက်သမား တသိုက် ကားပေါ်ပါသွားသည်ကို ကျွန်မ မသိလိုက်ပေ… တော်တော်နှင့် ပြန်မရောက်လာမှ ကျွန်မမှာ ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်ဆက်ကာ ဦးလေးကိုလဲ အော်မိသည် အထိ ဒေါသတွေ လှိုင်လှိုင်ထကာ သောင်းကျန်းမိတော့သည်…အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မန်နေဂျာကိုယ်တိုင် အရက်လိုက်ဝယ်ကာ ရစ်နေသည်ဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်….
ကျွန်မသောင်းကျန်းနေမှန်း သိတော့ နောက်တစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာကာ သူလဲ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ကာ ဖုန်းခေါ်၍ ကျွန်မသောင်းကျန်းနေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း လှမ်းပြောလိုက်သည်… နောက် ၅မိနစ်မှ မလာလျှင် ကျွန်မ အားလုံးကို ပစ်ထားခဲ့တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်… ကားမရှိလျှင်လဲ ခြေလျင် ပြန်တော့မည်ဟု ပြောလိုက်သည်…ထို့ နောက် နောက်ထပ်ရောက်လာသော တစ်ယောက်မှ ကျွန်မကို ဖျောင်းဖျသည်…ကုသိုလ်ရေးမို့ ဒေါသစိတ်မ၀င်ဖို့ အရက်သောက်ထားသော ပါးစပ်နှင့် ဖျောင်းဖျနေသည်… ထိုအခိုက် ကားပြန်ရောက်လာကာ ဦးလေးလဲ ကျွန်မ ဒေါသကို သိသည်မို့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းပင် မသိ…ပစ္စည်းချကာ တစ်ချိုးတည်း လစ်တော့သည်… ထိုမှ မန်နေဂျာလဲ မီးဖိုနားမှ မခွာ လိုအပ်သည်များကို စောင့်ကြပ်မှာကြားပေးသည်… (သူကိုယ်တိုင် ဘာမှ မချက်တတ် မလုပ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။)
ည (၁)နာရီခွဲ လောက်တွင် အားလုံး ချက်ပြုတ်ပြီးစီးသွားပြီမို့ ကောင်လေးနှင့်လွှဲကာ ကျွန်မ အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်… အိမ်ရောက်တော့ ဟိုလှုပ် ဒီလှုပ်နှင့် မနက် (၃)နာရီခွဲလောက်မှ အိပ်ပျော်သွားသည်… မနက်တွင်တော့ အားလုံး ချောချောမောမော ဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားကပ်နိုင်သည်…ဒါတောင်မှ (၆) ယောက်ပဲ ပါသည်…ကျန်သူများ အားလုံးမှောက်နေကြသည်…ကျွန်မတို့ သွားကပ်သော ဟင်းများကတော့ ၀က်သားနီချက် ၊ ဆိတ်သားနဲ့ ဒိန်နှပ် ၊ သီးစုံ ပဲကုလားဟင်း ၊ မုန်လာဥ ပိုးတီသုပ်တို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ကျောင်းရောက်တော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှ မေတ္တာရေစဉ်များ သွန်းဖျန်းပေးကာ တရားအတိုချုပ် ဟောကြားပေးသည်…အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပါလာသော လူများမှာ တခြား အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးသည် လို့ ဆိုပါသည်…ထို့ နောက် ဦးဇင်းများကိုပင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်နဲ့ မလောင်းလှူခဲ့ရပဲ ပြန်လာခဲ့ရပါသည်…ထို့ နောက် လူများ ကျွေးရန် ဒံပေါက်မှာထားသဖြင့် သွားရွေးပေးရပါသေးသည်…ထို့ မှ တဖန် ရောက်လာပြန်တော့ ဒံပေါက်အား အသား အဆီအနှစ် အားလုံး သမစေရန် ဆောင်ရွက်ရပါသေးသည်…အချိန်ကြည့်တော့ နေ့ လည် (၁၂)နာရီ ပင် ကျော်နေပြီ…ကျွန်မလဲ မဟန်တော့ သဖြင့် ဒံပေါက်တောင် မစားနိုင်ပဲ ကောင်လေး ထည့်ပေးသော ပါဆယ်ဆွဲကာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်…
ကျွန်မ အိမ်ရောက်တော့ ဒံပေါက်ကို ချကာ အိပ်လိုက်ပါတော့သည်…နေ့ လည် (၂)နာရီတွင် ဦးလေးမှ ဖုန်းခေါ်လာပါသည်…ညနေ တရားပွဲအတွက် နေရာထိုင်ခင်း ပြင်ရန် ထတော့ဟု ဆိုသည်..ကျွန်မ စိတ်က အထွဋ်အထိပ်ရောက်သွားသည်…နေရာထိုင်ခင်းပြင်ရန် ယောကျာ်းလေးများ မခေါ်ပဲ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်မကို နှိုးရသနည်း…ကျွန်မလဲ ဘုတောလိုက်ကာ ပြန်အိပ်မည် ပြင်ပြီးမှ မိမိ အိမ်အလုပ်များ ကို အရင် လုပ်မည် ဆုံးဖြတ်ကာ ဘုရားဆင်းတုများအား နံ့ သာရည်နှင့် ရေသပ္ပါယ်ကာ ဘုရားစင်သန့် ရှင်းရေးလုပ်…အ၀တ်များ အိပ်ယာခင်း မျက်နှာသုပ် အားလုံးကို တစ်ခါတည်းလျှော်လိုက်တော့သည်…ထို့ နောက် ရေမိုးချိုးကာ နာရီကြည့်တော့ ညနေ (၅)နာရီခွဲကျော်နေပြီ…နေ့ လည်စာကို ကမန်းကတန်းစားကာ စက်ရုံသို့ ပြန်လာခဲ့သည်…
စက်ရုံအရောက် မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် စိတ်တွေ အကြီးအကျယ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားသည်… လူက မရှိရတဲ့ အထဲ ရှိတဲ့သူတွေက အရက်ဝိုင်းထောင်နေသည်…မန်နေဂျာကြီးမှာလဲ ဆက်သွယ်လို့ မရ ဖြစ်နေသည်… ထို့ ကြောင့် မတတ်နိုင် ရှိသည့်လူနှင့်သာ ပရိတ်တရား နာကြားတော့မယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပင် ပြင်ဆင်လိုက်သည်…ထိုအချိန်နှင့် မရှေးမနှောင်းပင် ရာသီဥတုက ချက်ချင်းဆိုသလို မိုးသက်လေပြင်း ကျသကဲ့သို့ လျှပ်ပန်းတွေလက် မိုးကြိုးတွေ ပစ်ကာ မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်းပင် ရွာချတော့သည်…သို့ သော် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အပျက်မခံချင်သောကြောင့် ဆရာတော်ပင့်ရန် ၊ ဆရာတော်အား ကပ်ရန် ၀တ္ထုငွေ ၊ ပရိတ်ပန်းဝယ်ရန် ၊ ပရိတ်ရေ ၀ယ်ရန် စီစဉ်ရတော့သည်…ဤတွင် ပြဿနာကား… ဘယ်မှာလဲငွေ??? မန်နေဂျာကြီးဆီမှာ အပ်နှံထားသော ဘဏ္ဍာငွေများ…ထို့ ကြောင့် မန်နေဂျာကြီးအား ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဆက်သွယ်ပါသော်လဲ မည်သို့ မျှ ဆက်သွယ်၍ မရ…နောက်ဆုံးတော့ နှမလက်လျှော့ နေလေရော့ဟု မိမိကိုယ်ကို ဆိုကာ ဆရာတော်အား ဖုန်းဆက်၍ ယနေ့ တရားပွဲအား မပြုလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း ရှေ့ မျက်နှာနောက်ထားကာ လျှောက်ထားလိုက်ရတော့သည်… ဤတွင် ဆရာတော်က အားပေးသော အနေဖြင့် “ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ဒကာမရယ်…နောက်တော့လဲ ပြန်စီစဉ်တာပေါ့..ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန်တစ်နေကုန်တော့ ဦးဇင်းမအားဘူး…”ဟု ကြိုတင်သတိပေးလိုက်သည်… ဆရာတော် မသိလိုက်သည်က နောက်နောင်တွင်လဲ တပည့်တော် မလျှောက်ရဲဝံ့တော်ပါ ဟုသာ စိတ်ထဲက တီးတို တောင်းပန်လိုက်ပါတော့သည်….
ထိုမှအပြန် ကျွန်မတို့ စက်ရုံမှ အခြားဘာသာဝင် တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ တော့ သူက တရားနာပြီးပြီလားဟု မေးသောအခါ မိမိမျက်နှာ ဘယ်နားထားရမည်ပင် မသိ…သူမေးသည်က ရိုးရိုးမေးသည်လော.. ဆန်းဆန်းမေးသည်လော မသိပါ…မျက်နှာပေးက ပြုံးစစမို့ ဒေါသက ကိုယ့်မြန်မာများဘက်သို့ သာ ဦးတည်လိုက်ချင်သည်… ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများပီပီ ပြုနိုင်ခဲသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံအောင် စီစဉ်ပေးသူ ရှိပါလျက် ဂုတ်က ဆွဲကိုင်၍ပင် ခေါ်မရလောက်အောင် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်ရပ်မျိုးကို စာလာဖတ်သူ မြန်မာများအား အသိတရား လက်ကိုင်ထားစေရန် ရေးသားလိုက်ရပါသည်.... (ဤနှစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေကို ကုသိုလ်စိတ်မှ အကုသိုလ်စိတ် အဖြစ် လွဲမသွားစေရန် မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်ကာ အိမ်ပြန်လိုက်ပါတော့သည်။)
*မှားယွင်းမှုများ လက်မခံနိုင်သည်များရှိပါက သည်းခံတော်မူပေးကြပါကုန်*
Posted by ကာရံဆူး at 5:00 PM7comments:
ရူးလောက်အောင် လွမ်းမိပါရဲ့ …
မင်းမရှိတဲ့ နေရာ မင်းမရှိတဲ့ ရာသီတိုင်း
တို့ လွမ်းမိတိုင်း မျက်ဝန်းကို မှိတ်
မင်းအရိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းရနံ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်
နာရီတိုင်း မသိ ရာသီတိုင်း မင်းမရှိပေမဲ့
တို့ အနားမှာ မင်းမရှိပေမဲ့
ဝေးဝေးကလွမ်းနေသူ တစ်ယောက်မို့ 
တိုးတိတ်ညင်သာ ခြေသံများစွာနဲ့ 
** ညက ပိတောက်တွေ အိပ်မက်မက်လို့ ရေးမိတဲ့ ကဗျာလေးပါ...**
Posted by ကာရံဆူး at 11:27 AM5comments:
“ဘ” နဲ “့ဝ” စခဲ့ရ
မောကျောစိုက် မောလိုက်သည့် ဖြစ်ချင်း….
ဘာမှန်းမသိတဲ့ “ဘ၀”မို့ 
အဆုံး အစ မရှိ ပျော်လိုက်သည့် ကိုယ့်အဖြစ်နှယ်…
စာဖွဲ့ စီ မကုန်နိုင်တယ်…
“ဒေါသ”က ရှေ့ ကပါ…
အမှားအမှန် မသိလေကွဲ့ 
မပြောချင်တော့တဲ့ ဒီ “မောဟ”တွေ…
လောက “ဒဏ်” ထွေထွေရယ်…
“ မေမေရယ်… ကူပါဦး” လို့ 
“ငါ”ဆိုတဲ့ “အတ္တ” တစ်ခု
အစပြုလို့ ထွက်ခဲ့တဲ့ ဒီခရီး…
မပြီးသေး မနီးဝေးမို့ 
အရှုံး အနိုင် မသေချာသေးသရွေ့ တော့
ရှေ့ ဆက်ကာ တိုက်ပွဲနွှဲဖို့ 
Posted by ကာရံဆူး at 5:04 PM2comments:
မှတ်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း… ကျွန်မအနေနှင့်တော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ထင်မြင် ယူဆ ပြောဆိုခြင်းဟု ပြောလျှင် မှားမည်မထင်….. မိမိတို့ နေထိုင်ရာ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် အိမ်ပတ်ဝန်းကျင် အလုပ်ဝန်းကျင်၌ မှတ်ချက်အမျိုးမျိုး ပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရဖူးသည် မဟုတ်ပါလော….. လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ လူတွေဆီက ဘယ်လို မှတ်ချက်မျိုး ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နှခါများ ရခဲ့ဖူးပါသလဲ… ဘယ်သူကမှ အတိအကျ မမှတ်ထားပေမဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ မှတ်ချက်ပေးခြင်းကိုတော့ ရခဲ့ဖူးကြမှာပါ…..ဥပမာ “ ကောင်မလေးက တော်တယ်…” “ ကောင်မလေးက ကဲကဲလေးပါ..” “ သူက ဂျစ်ကန်ကန်လေးလေ..” “ စာတော်တယ်… စာညံ့တယ်….” စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ….
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မှတ်ချက်ပေါ်မှာ တစ်ချို့ ကလဲ တုန့် ပြန်ကြသလို တစ်ချို့ ကလဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြ…တစ်ချို့ ကလဲ အရွဲ့ တိုက်တတ်ကြတယ်…. မိမိက ဘာရယ်မဟုတ် ပြောလိုက်မိတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုကြောင့် တခြား လူတစ်ယောက်မှာ ကြေကွဲရတာ နာကျင်ရတာ သို့ တည်းမဟုတ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရတာ သို့ တည်းမဟုတ် ထိခိုက်ခံစားနေရတာ ..စတာတွေဟာ… ပါးစပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ ပြဿနာတွေ ချည်းသာ…. ကောင်းတာ ရှိသလို ဆိုးတာလဲ ဒွန်တွဲနေမှာပါ….
လူတွေ အဘယ်ကြောင့် တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို မှတ်ချက်များပေးသနည်း…. ဒီမှတ်ချက်တွေကရော လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လောက်များ အကျိုးရှိစေမှာလဲ… သို့ တည်းမဟုတ် ဘယ်လောက်များ အကျိုးယုတ်စေမှာလဲ…. ဤကဲ့သို့ လူသားဆန်ဆန် တွေးတောမိပါက လူတွေ မှတ်ချက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပေးရဲပါတော့မလား… လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀သည် ပညတ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါသည်ဟု ပြောရလောက်အောင်ပင်…. ပြောပါများတော့ သူတို့ မှတ်ချက်အတိုင်း အန်ဝင် ခွင်ကျ သွားကြပြီလား…. ဒါမှမဟုတ် မိမိယုံကြည်ရာကို ဦးတည်လို့ သူတို့ မှတ်ချက်နှင့် သွေဖယ်ရာ လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ်မှာ မတ်မတ် ရပ်တည် နေနိုင်သလား ဆိုတာ မိမိ အပေါ်မှာသာ မူတည်နေသည်…. တကယ်တမ်း ဆန်းစစ်ရင် လူတွေက သူများ မှတ်ချက်နဲ့ အသက်ဆက်နေတာလား… မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်မ ငြင်းပါရစေ…..
တစ်ချို့ က သူများ အသံနဲ့ တင် မှတ်ချက်ပေးတတ်ကြသည်…တစ်ချို့ က သေသေချာချာ ထဲထဲဝင်ဝင် သိပြီးကာမှ မှတ်ချက်ပေးသည်…. မည်ကဲ့သို့ သော မှတ်ချက်မျိုးကို ပေးမိပါစေ…. လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပေးထားသော မှတ်ချက်သည် မိမိ သေသည် အထိ သယ်ဆောင်သွားရသည် မဟုတ်ပါလော…. လူသေသွားသည့်တိုင် လူတွေရဲ့ မှတ်ချက်ကို နာယူဖို့ နာမည်ကြီးကတော့ လောကတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့စမြဲပါပဲ…. မယုံဘူးလား…. လူတစ်ယောက် သေသွားပေမဲ့ သူ့ နာမည်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောလာတိုင်း “ အဲ့လူပေါ့ ပေါင်းရခက်တဲ့သူ…အဲ့လူပေါ့ … ” အစချီ၍ သူတို့ ၏ မှတ်ချက်များကို ထပ်မံ အတည်ပြုကြဦးမည်…. သူတို့ မမေ့သရွေ့ ပေါ့….
လူတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော မှတ်ချက်ပေးကြည့်ဖူးပါသလား…. “ တစ်ချို့ ကတော့ မိမိကိုယ်မိမိ မှတ်ချက်ပေးသလိုလိုပင်…ငါ တော်တော် တော်တဲ့ ငါပါလား…” “ ငါ့ဟာ သတ္တိတော်တော် ကောင်းပါလား… ငါက မှန်ရာပဲ လုပ်တဲ့သူ..”ဟု စသည့် မှတ်ချက်မျိုးများ ပေးခဲ့ဖူးချင် ဖူးပါလိမ့်မည်…. သို့ သော် မိမိ ကိုယ်ကို မှတ်ချက်ပေးသည့်အခါ လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ စဉ်းစားပြီး ပေးသလား သို့ မဟုတ် သေသေချာချာ စိစစ်ပြီးမှ ပေးရဲ့ လား… တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မြင်ရသည့်အချိန်နှင့် သူများက ကိုယ့်ကို ကြည့်နေသော အချိန်က ပိုများသောကြောင့် သူများ၏ မှတ်ချက်သည် မှန်ကန်နိုင်သည့် ရာခိုင်နှုန်း ပိုများချင် များပေလိမ့်မည်…
သို့ သော် လူဆိုသည်က ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သာ သိသည် မဟုတ်ပါလော…… လူတွေ မည်သို့ ပင် မှတ်ချက်ပေးစေကာမူ မိမိလမ်းကို မိမိ ဦးတည် လျှောက်ရမည်သာ ဖောက်ရမည်သာ ဖြစ်သည်…. သူတစ်ပါးရဲ့ မှတ်ချက်ကြောင့် ဦးတည်ရာ ပြောင်းသွားတာမျိုး ယိုင်နဲ့ သွားတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါက မိမိကိုယ် မိမိ စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာသူ ပျော့ညံ့သူ အဖြစ် ပဏာမ လက်ခံထားသင့်သည်…. ပဏာမဟု ပြောခြင်းမှာ ထိုအတွေးမျိုးကို ခဏသာ တွေး၍ အချိန်မီ ပြန်လည် ပြုပြင်ယူပါက မိမိသည် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူ တစ်ယောက် အဖြစ် တမဟုတ်ချင်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်….
ထို့ ကြောင့် လူတို့ သည် မိမိဘ၀လမ်းကို ကိုယ်တိုင် လျှောက် ကိုယ်တိုင်ဖောက်ရမည်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိမိဦးတည်ထားရာ လမ်းကြောင်း ၊ ပန်းတိုင် ၊ ရည်မှန်းချက်သို့ သွားရာတွင် သူတစ်ပါး၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်သော မည်သို့ သော မှတ်ချက်မျိုးကို ပေးသည်ဖြစ်စေ… ထိုမှတ်ချက်များကြောင့် ဘ၀င်မြင့်စရာမလိုသလို စိတ်ဓါတ်ကျ အားငယ်နေစရာလည်း မလိုပေ…. မြန်မာဆိုရိုးစကား တစ်ခုအတိုင်း ပြောရလျှင် ချီးမွမ်း (၇) ရက် ကဲ့ရဲ့ (၇) ရက်ပင် မဟုတ်ပါလော…. မှတ်ချက်ကို လွယ်လွယ်ပေးတတ်သော သူများအတွက်မှာကား မိမိ၏ နှုတ်ထွက် မှတ်ချက်တစ်ခုကြောင့် သူတစ်ပါးအား အနည်းငယ် အကျိုးပေးပါက သိပ်မသိသာလှပေမဲ့ များစွာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါက သေချာစဉ်းစား လေ့လာပြီးမှသာ မှတ်ချက်ပေးသင့်ပါသည်……သို့ အတွက်ကြောင့် မိမိ၏ စိတ်ကူးအ်ိပ်မက် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားများအား အကောင်အထည် ဖော်နေသူများအဖို့ မှာကာ့း လူတွေပေးသောမှတ်ချက်များအား တတ်နိုင်သမျှ လျစ်လျူရှုနိုင်သမျှ ရှုကာ ရည်ရွယ်ရာဆီသို့ တစိုက်မတ်မတ် မဖြစ်မနေ လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်သော ခိုင်မာသော စိတ်ဓါတ်ရှိသည့်လူသားများ အဖြစ် လောကတွင် ရှင်သန်ရပ်တည် နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်..
Posted by ကာရံဆူး at 11:56 PM3comments:
အရောင်တွေ ပြောင်းသွားတယ်…ဟုတ်ပါသည်..သူမ အရောင်တွေ အသွင်တွေ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ….သူမရဲ့နွေးထွေးမှု ဂရုစိုက်မှု ကြင်နာမှုတွေက အေးစက်မှုအသွင် ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာ…ဒီ ငါးနှစ်တာ ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုအပြီးမှာပါပဲ……
သူမရဲ့ တစာစာညံနေတဲ့ အသံကလေးကြောင့် သူမကိုစတင် အသိမှတ်ပြုခဲ့တယ်… (သူပြောဖူးခဲ့တာပါ) ချစ်သူရည်းစားဘ၀မှာ ဒီအသံကလေးက သူ့ အတွက် အရမ်းကို နားဝင်ချိုခဲ့ဖူးတယ်… သူမက အရမ်းကို ချစ်တတ်တယ်…သူမချစ်တဲ့သူကိုလည်း အရိပ်လိုပဲ ကြည့်နေတတ်တယ်… သူမရဲ့ ဒုတိယ ကိုယ်ပွားအဖြစ်ပေါ့….သူမမှာ သူ့ အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုက သူမကိုယ် သူမထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုတယ်…သူမ ထိခိုက်မှာထက် သူထိခိုက်မှာကို သူမ သေမလောက် ကြောက်တယ်…အရာရာ သူ့အတွက် သူမ စဉ်းစားပေးခဲ့ ဦးစားပေးခဲ့ဖူးတယ်…
“ကိုရေ…မိုးတွေရွာနေတယ်… အအေးမိမယ်နော်…ထီးယူသွားပါလား…” “ ကို…အရက် ဘီယာ ဆေးလိပ် ဆိုတာ ကိုယ်လူပျိုတုန်းက သောက်ခဲ့ဖူးပြီလေ…အခု ကိုယ့်မှာ အိမ်ထောင်ကျနေပြီ…ဒီအရာတွေက ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေလား…ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေလား..ပထမဆုံး ကို ပိုက်ဆံကုန်မယ်… ပြီးရင် ထွေရာလေးပါး အကျိုးမရှိတာတွေ ပြောမယ်…နောက်နေ့ ကျရင် ကိုယ်ခေါင်းကိုက်မယ်…. ကြာလာရင် ကို ရောဂါရမယ်…ဘယ်မှာ ကောင်းကျိုးပေးလို့ လဲ ကိုရယ်..မသောက်ပါနဲ့ နော်”… “ ကိုကလဲကွာ…အလုပ်က ဘယ်လောက် အရေးကြီးနေလို့ လဲ..ကိုမှ နေမကောင်းတာ…မသွားနဲ့ တော့..”… “ ကိုရေ…ဒီအကျီ င်္လေးနဲ့ ဆို ကိုနဲ့ အရမ်းလိုက်တာ..ဒါလေး ၀တ်သွားနော်”….“ အို ကိုရေ..အရမ်းနောက်ကျမနေနဲ့ နော်…. ကို ကြိုက်တာလေးတွေ ချက်ထားတယ်…တူတူစားချင်လို့ ပါ…ပြန်လာခဲ့နော်…”.. သူမ ထိုကဲ့သို့ ကြင်နာပါသည်….
သူ ဒုက္ခရောက်သောအချိန်တွင် သူငယ်ချင်းဆိုတာ ပေါ်မလာပဲ သူအဆင်ပြေမှ့ အိမ်ထောင်ရေးလေး သာယာတော့မှ အိမ်ကို ကောင်းကျိုး ပေးဖို့ လာတာ မဟုတ်ပဲ… သူ့ ကို တမင်သက်သက် အကျင့်ပျက်အောင် ဖျက်ဆီးမယ့်သူငယ်ချင်းမျိုးတွေလာတိုင်း သူမက သာသာထိုးထိုး ပြောတဲ့ အခါတိုင်း သူ့ မှာ တီကို ဆားနဲ့ ပက်သလို နာနာသွားတတ်တယ်…. သူမရဲ့ သူအပေါ်ထားတဲ့ ကရုဏာဒေါသတွေပါ….. ထိုသို့ စသည်စသည် များသည် သူ့ အတွက်တွေချည်းသာဆိုတာ သူ သဘာမပေါက်ခဲ့ဘူး….
အရာရာကို သူကောင်းဖို့ အတွက် သူမ အမြဲ စဉ်းစားတွေးတော တတ်သူပါ…. သူမကိုကျတော့ သူ့ ရဲ့ အလေးထားမှု ဂရုစိုက်မှုတွေက အလိုလို လျော့ကျလာခဲ့တယ်… သူမကို တစ်နေရာရာ လိုက်ပို့ ခိုင်းဖို့ ချိန်းဆိုထားရင်တောင်…သူက နောက်ကျမှ ရောက်လာတတ်တယ်… သူမ စိတ်ကောက်တိုင်း ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ စိတ်ကောက်မနေနဲ့ လို့ သူ ငြိုငြင်စွာ ပြောတတ်လာတယ်…သူမရဲ့ မျက်ရည်တွေကို လျစ်လျူရှု ထားတတ်တယ်… အရင်က သူ တမင် သိမ်းထားခဲ့လေသလားဟု ထင်မှတ်ရသော သူ့ ရဲ့ ဒေါသတွေ သူမ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်လာခဲ့တယ်… သူ့ ရဲ့ ပြတ်သားမှုတွေကို သူမ မြင်သာအောင် ပြတတ်လာတယ်…. သူမအတွက် သူဟာ အရာရာထက် အရေးကြီးသူပါ… သူ့ အတွက်တော့ သူမက ဘာမဟုတ်တာ ဖြစ်သွားတတ်ပြီလား…
“နွယ့်ရဲ့တီတီတာတာ ပြောတာလေးတွေ…ကလေးလေးလို စိတ်ကောက်တတ်တာလေးတွေ.. ဆိုးတာ နွဲ့ တာလေးတွေကို ကိုက ချစ်တာလေ… စိတ်ဆိုးနော်…စိတ်ကောက်နော်..ကို ချော့မယ် သိလား…”…သူမ အတွက်ပုံပြင်ထဲက စာသားတွေလို ပုံနှိပ်ထားစရာမလိုပဲ အာရုံမှာ စွဲထင်နေဆဲပါ… သူမငိုကြွေးမိတိုင်း နာကျင်နေတဲ့ ရင်အစုံက တဖြည်းဖြည်း ဒဏ်ရာကနေ အမာရွတ်တွေ အသားမာတွေ တက်လာခဲ့ပြီ….
သူနဲ့ မှ စားဝင်မယ် ထင်ထားတဲ့ နေ့ လည်စာ ညစာတွေဟာ သူ မပါပဲလည်း သူမတစ်ယောက်တည်း စားတတ်ခဲ့ပြီ… အိမ်ပြန်နောက်ကျမယ်လို့ သူပြောရင်လဲ ဘာကြောင့် ဆိုတာ မမေးပဲ…အင်း တစ်လုံးဖြေကာ အိပ်ယာဝင်တတ်ခဲ့ပြီ… သူနဲ့ ချိန်းဆိုထားလို့ သူမလာနိုင်ခဲ့ရင်လည်း သူမ အဆင်ပြေအောင် သွားတတ်ခဲ့ပြီ…သူနေမကောင်း ဖြစ်ရင်လည်း သူ့ အတွက်လိုအပ်သော ဆေးများ တိုက်သည်မှအပ အပိုစကား မဟတော့ချေ…. သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ကို ငွေလာချေးရင်လည်း သူမမှာ ရှိတာ အကုန် ထုတ်ပေးလိုက်တော့သည်… သူမအတွက် ရင်ထဲမှာ အသားမာထုကြီးက ထုံပေပေ ခံစားနေရသလိုပင်….
မိုးခြိမ်းတိုင်း ကြောက်ရွံ့ မိတဲ့ သူမမှာ ခုတော့ မိုးသံတွေကို သံစဉ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်သားရနေတတ်ပြီ… ပုံမှန်အချိန်တွေထက် သူနောက်ကျတိုင်း သူမ စိုးရိမ်စိတ်တွေ လျော့ပါးခဲ့ပြီ… ကောင်မလေးတွေနဲ့ သူ စကားပြောတာတွေ့ တိုင်း သူမ မျက်နှာလွှဲတတ်ခဲ့ပြီ…. သူမ အတွက် ဒီလို နေနိုင်ဖို့ ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်က သင်ပေးသွားခဲ့ပြီလေ…
“ နွယ့်ကို ကြည့်ရတာ ခုတစ်လော တစ်မျိုးပဲ…ကို့ အပေါ် အေးစက်သွားသလိုပဲ..” သူမ သူ့ ကို ကြည့်မိသည်…သူမ အကြည့်တွေမှာ အဓိပ္ပါယ်များစွာ ပါနေသည်… “ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီလိုပါပဲ”.. ဟုသာ သူမ အလိုက်အထိုက် ပြောလိုက်သည်… သူမ မယားဝတ္တရားတွေ မပျက်ကွက်ခဲ့ပါ…. သို့ သော် သူမ အရင်လို မနွေးထွေးတော့တာတော့ သေချာသည်… သူမ အရင်လို မကြင်နာတော့ပါ… သူမရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေက သူ့ ကို ကျဉ်းကျပ်စေမယ်ဆိုရင် သူမ ဥပေက္ခာ ပြုထားလိုက်တာ သူ စိတ်ချမ်းသာပြီး သူမ စိတ်ကို သက်သာစေတယ်…နာကျင်မှုကို လျော့ပါးစေတယ်… သူမ ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်းကို စိတ်အေးအေး လုပ်လာနိုင်တယ်… သူ့ အတွက် သူမ မေတ္တာတွေ ပို့ ပေးပါတယ်…
သို့ သော်..သူမ အေးစက်သွားခဲ့ပြီ…..သူမ အရောင်တွေ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ..သူမ ရဲ့ အကြည့် စကား အားလုံးဟာ အရင်ကနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့သည်… သူ သူမကို အရင်လို စကား ပြောစေချင်သည်…အရင်လို နွေးထွေးစေချင်သည်… သူ့ အပေါ် အရင်လို သ၀န်တိုစေချင်သည်… ဒါတွေ သူမမှာ ပျောက်ဆုံးကုန်လိမ့်မယ်လို့ သူ ထင်မထားခဲ့…. သူ့ ရဲ့ စိတ်ကို အရင်လို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး သူမရဲ့ အကြင်နာတွေ အောက်မှာ သူနေချင်လှသည်…သူ တောင်းတမိသည်…. သူမရဲ့ စေတနာတွေကို သူ အသိအမှတ်ပြုချင်သည်….. အချိန်တွေ နှောင်းသွားခဲ့ပြီလား… သူမရဲ့ အချစ်တွေ တဖန်ပြန်လည် နိုးထလာဖို့ သူ မျှော်လင့်သည်… သူကြိုးစားမည်….
သူမရဲ့ အချစ်တွေ ကုန်ခမ်းသွားသည်တော့ မဟုတ်..သို့ သော် အရင်လို အရှိန် အဟုန်မဲ့ စီးဆင်းခြင်းမျိုး မဟုတ်တော့ပေ…သူမ သူ့ ကို ချစ်နေဦးမှာပါ… ချစ်နေဆဲပါ… အကန့် အသတ်ဘောင်အတွင်းကပင် သူမ ဆက်လက် ချစ်သွားမှာပါ… သို့ သော်…သူမ အေးစက်သွားသည်ကတော့ အသေအချာပင် ဖြစ်တော့သည်…….
Posted by ကာရံဆူး at 11:39 AM5comments: